OSC-Myanmar ( Online Service Center Myanmar) အနေနဲ့Service တွေကို ပေးတဲ့အခါမှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့Information တွေကို 100% Safe ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေရှည်လက်တွဲသွားနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ယုံကြည်မှု ရရှိအောင် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်။
သို့ပါသောကြောင့်... ကျွန်တော်များ OSC-Myanmar ( Online Service Center Myanmar) ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် အမြဲတမ်း လက်တွဲထားနိုင်ပါကြောင်းကို သိစေအပ်ပါသည်။
Admin & Service Team ( Online Service Center Myanmar)
Online အသုံးပြုနေသူများ၊ အွန်လိုင်းသုံးပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေသူများအတွက် ( လိုအပ်မယ်ထင်ရင် Save ထား၊ Share ထားလိုက်ပါ။ )
Covid-19 ကြောင့် လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများ ရပ်နားထားလိုက်ရတာရှိသလို Online ကိုအသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်အောင် လုပ်ဆောင်လာမှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်များ OSC-Myanmar ( Online Service Center Myanmar )မှ Stay At Home ရင်း ဒီလို Service တွေကို ပြန်လည်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
OSC-Myanmar ( Online Service Center Myanmar )မှ ဝန်ဆောင်ပေးနေမှုများ....
#ပေးသွားမည့် #Service နဲ့ Service ခ တွေကတော့....
1. Facebook Page Settings Service. 💵💲50
Facebook Page က ဖွင့်ရတာလွယ်သလို မိမိဘာသာဖွင့်မယ်ဆိုရင်အခမဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်၊ သို့သော် Settings ကောင်းစွာချမထားတဲ့ Page တခုက အများအမြင်မှာ အဝတ်မပါတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်နေရသလိုဖြစ်နေတတ်ပြီး၊ ဆားမပါတဲ့ဟင်းတခွက်လိုလည်းဖြစ်နေစေတတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ရင်တပြားမှမကုန်ပေမယ့် မလုပ်တတ်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Service အပ်လို့ရပါတယ်။
လုပ်ငန်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Personal အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Page ဖွင့်ချင်တယ်၊ Page ကတော့ဖွင့်ထားတယ် ဘာ Settings မှ သေခြာမလုပ်ရသေးဘူးဆိုသူများအတွက် Page Setting Service ပေးပါတယ်၊ လက်ရှိ ကိုယ့်မှာ Page ရှိတယ် စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Service အပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ Service ပြီးသွားတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Page က ယခင်နဲ့ ယခုက ဆီနဲ့ရေလိုကွာသွားတာပဲလို့ ကောက်ချက်သွားစေရပါမယ်။
( Page တော့ဖွင့်သုံးချင်တယ် မသုံးတတ်ဘူးဆိုတဲ့သူများအတွက် Page Settings Service ယူလိုက်တာနဲ့ Page အသုံးပြုနည်းကိုပါ သင်ကြားပေးပါတယ်။ )
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် => http://bit.ly/FacebookPageSettingsService
2. Facebook Boost Service. 💵💲30,💲50,💲100
မိမိတို့ရဲ့ Online Shop ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်း Page များ၊ မိမိတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်များ၊ မိမိတို့ရဲ့ Event များကို တခနလေးအတွင်း လူအများကြီးသိရှိသွားစေဖို့ဆိုရင် Boost လုပ်ပြီး ကြော်ငြာဖို့လိုပါတယ်၊ အဲ့ဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Advertising Service ပေးနေပါတယ်၊ Boost Service အပ်ချင်တယ်ဆိုပါက အသေးစိတ်ကို စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ အပ်နှံလို့ရပါတယ်။
3. Facebook Boost Training Service. 💵💲50
မိမိတို့ရဲ့ Online Shop ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်း Page များ၊ မိမိတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်များ၊ မိမိတို့ရဲ့ Event များကို တခနလေးအတွင်း လူအများကြီးသိရှိသွားအောင် ကြော်ငြာချင်တယ်၊ သို့ပေမယ့် Boost ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့သူများ၊ Boost တော့လုပ်တတ်တယ် သိပ်မထိရောက်လို့ပါ၊ ကိုယ်တိုင် Boost လုပ်ရင် Error တွေခနတိုင်း တက်တတ်လို့ပါ၊ ဆိုတဲ့သူများအတွက် Facebook Boost ပြုလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်( အခြေခံကစပြီး ) သင်ကြားပေးပါတယ်။
Boost ပြုလုပ်နည်းသင်တန်းတွေတော့တက်ဖူးတယ်၊ သင်ပြီးမကြာဘူးမေ့သွားတတ်လို့ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျ မလုပ်တတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်၊ ဆိုတဲ့တဲ့သူများအတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီက သင်တန်းကတော့ ၁ ခါတက်လိုက်တာနဲ့ ရာသက်ပန်သင်တန်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားလိုက်လို့ မသိဘူး၊ မတတ်ဘူး၊ ဆိုတာတွေမရှိတော့ပဲ အချိန်မရွေး သိလိုရာကိုမေးမြန်းခွင့်ပါ ရရှိနေမှာပါ။
2014/2015 ကနေ ယနေ့အထိ Advertising Service နဲ့ Facebook Boost Training များကိုပေးနေတဲ့ Admin team ထဲမှ ကို Aung Kyaw Soe ( m.me/aungkyawsoe.sb ) ကိုယ်တိုင် အနီးကပ် သင်ကြားပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
4. Facebook Boost Error Fix Service. 💵💲50
Facebook မှာ Boost ကို မလုပ်တတ်၊ လုပ်တတ်နဲ့လုပ်ရင်း Policy Error, Payment Error. တွေတက်လို့ ဆက်ပြီး Boost လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေအတွက်လည်း Error Fix ပေးတဲ့ Service ပေးပါတယ်၊ Error Fix တဲ့ Service အပ်ပြီး Error ရှင်းသွားတော့မှ၊ ယခင်အတိုင်း Boost ပြန်လည်ပြုလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့မှ Service ခ ပေးချေဖို့လိုပါတယ်။
5. Facebook Account Help Service. 💵💲10
မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ Facebook Account များမှာ Error တက်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ Login ဝင်လို့မရတာ၊ Lock ကျတာ၊ Password မေ့သွားပြီး Password reset ပြန်လုပ်လို့မရဖြစ်နေတာ၊ မျိုးတွေအတွက်လည်း Service ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Read More => http://bit.ly/Help_FB
6. Website Service. 💵💲100
ဒါကတော့ Website တခုကို Startup ပေးတဲ့ Service ကို သီးသန့်ပေးတာပါ၊ Web Design, Web Hosting, များအတွက် ကျသင့်တာတွေတော့ သီးခြားကျခံရပါမယ်။ ( အပြီးအစီးအပ်လိုတာများရှိပါကလည်း အပ်နှံလို့ရပါတယ်။ )
7. Domain Name Service.
Domain Name လိုအပ်သူများရှိပါကလည်း Domain Name များကို ဝယ်ယူပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ( အခုကတော့ Visa, Master card တွေအလွယ်ရနေပြီဆိုတော့ မိမိတို့ဘာသာလဲ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။ )
8. Social Account Security Service. 💵💲10
မိမိရဲ့ Facebook Account ကို Hack လုပ်ခံရမှာကြောက်တယ်ဆိုသူများအတွက် Hack ပြုလုပ်ခြင်းမခံရအောင် Security မြှင့်ပေးခြင်း၊ Security Knowledge များပေးခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ( အခမဲ့ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက်လည်း၊ OSC-Myanmar ရဲ့ Website နဲ့ Facebook Page ထဲမှာ တင်ပေးထားပါတယ်၊ ရှာပြီးလိုက်လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ )
Read More... http://www.osc-myanmar.blogspot.co.uk/p/security-services.h…
9. Content Writer Service. ( 1 Post 💵💲5 )
Content Writer သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်ချိန်တိုင်း စာရေးပေးမယ့်သူလိုအပ်နေလား?
ဒီနေ့လိုခေတ်မျိုးမှာ လူတိုင်းလိုလို မိမိတို့ရဲ့ အသေးစားမှ အကြီးစားလုပ်ငန်းများအထိ Online ပေါ်တင်ပြီး လူသိအောင်ပြုလုပ်လာကြပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ အဓိကလိုအပ်ချက်တွေထဲက ၁ ခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ Content ဖန်တီးမှုလေးတွေကလည်း မပါမဖြစ် ပါဝင်နေပါတယ်။
နှုတ် ၁၀၀ စာ ၁ လုံး ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ရေးသားထားတဲ့ Content တခုက ကိုယ့်လုပ်ငန်း၊ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ၊ တွေကို အခြားသူတွေဆီကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့ ရောက်သွား၊ သိသွားစေနိုင်ပါတယ်။
See More.. https://www.facebook.com/OSCMyanmar.mm/posts/1319784548229376
10. Online Class Group Settings Service. 💵💲10
ဒါတော့ သင်တန်းကျောင်းများ/သင်တန်းပေးနေသူများ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပေးတဲ့ Service ပါ၊ Covid-19 ကြောင့် အပြင်မှာ သင်တန်းတွေပိတ်လိုက်ရသူများအနေနဲ့ Online ကနေ သင်တန်းတွေပေးဖို့လုပ်လာကြပါတယ်၊ အဲ့လိုလူများအတွက် Facebook Group မဖွဲ့တတ်သူများ၊ Group Settings ကို သေခြာမလုပ်တတ်သူအများအတွက် အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Online Class အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး Private Group အနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားလို့ Group နာမည်နဲ့ရိုက်ရှာရင်တောင် Facebook မှာ ဘယ်သူမှ ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ Group Admin ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးမှသာ Group ထဲကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ Group ထဲမှာတင်ထားတာတွေကိုလည်း ပြန်လည် Share ပြုလုပ်ခွင့်ကိုပါ ပိတ်ပေးထားမှာပါ။
Group ထဲမှာ LIVE လွှင့်သင်ကြားနိုင်ပြီး မိမိ LIVE ကိုလည်း Group ထဲက သင်တန်းသားများသာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ သင်တန်းကာလပြီးသွားပြီးသူများကို Group ထဲမှထုတ်ပယ်ပြီး သင်တန်းသားအသစ်များကို ယခင် သင်ပေးထားသည့်အဟောင်းများကို သင်ခန်းစာ( ၁ )၊ သင်ခန်းစာ( ၂ )၊ ဆိုပြီး ခွဲခြားပြီး ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ်။ ( ခနခန LIVE လွှင့်ပြီးသင်စရာမလိုတော့တာမျိုး။ )
Online Class Group ပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
11. Other Help and Training Services.
ဒါကတော့ အလျဉ်းသင့်သလို ပေးသွားမယ့်သင်တန်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများပါ။
အသေးစိပ်ဖတ်ရှုရန် => http://bit.ly/InexpensiveTrainingsService
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ( Service ခ တွေကိုတော့ ဒေါ်လာနဲ့ပေးချေလို့လည်းရသလို၊ မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ပေးချေမည့်နေ့ပေါက်စျေးအတိုင်းလည်း ပေးချေလို့ရပါတယ်။ )
အခြားလေ့လာလိုသည်များ၊ သိရှိလိုသည်များ၊ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါက။
Facebook Page - www.facebook.com/OSCMyanmar.mm
Website - www.osc-myanmar.com
LIVE Chat Message -
📱Viber and Call - ‎‎‎09421157911
📱Viber and Call- ‎‎‎09794426154
တို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
( Online Service Center Myanmar )
တန်ဖိုးနည်း Service တွေ တန်ဖိုးနည်း Training တွေပေးနေတဲ့ နေရာက OSC-Myanmar နော် ကျော်မသွားနဲ့ နည်းပညာနဲ့ မကင်းတဲ့သူဆို(Facebook သုံးနေတယ်ဆိုရင်ကို) ဝင်လေ့လာသွား အကျိုးတော့ မယုတ်စေရဘူး အကျိုးရှိစေရမယ်လို့ 100% အာမခံတယ်။ 😉😉😉
ကိုယ်တိုင် Boost လုပ်တတ်ချင်ရင် သင်တန်းပေးတယ်၊ Boost ကိုယ်တိုင် မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်း Boost Service ပေးတယ် အဲ့ဒီ ၂ ခုလုံးက တန်မှ တန်တဲ့ တန်ဖိုးနည်း Service တွေနော်....
သင်တန်းတက်ပြီး ဘာမှ ရေရေရာရာတတ်မလာဘူးဆိုတာမျိုး မရှိတော့မယ့် သင်တန်းစတက်လိုက်တာနဲ့ ရာသက်ပန် သင်တန်းသားဖြစ်သွားစေမယ့် အခွင့်အရေးလည်းရှိနေပါတယ်။ 😉😉😉
Facebook Account ဆိုင်ရာတွေလား...?
Facebook သုံးနေပြီဆိုတာနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ Lock ကျတာတွေ Hack ခံရတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးသလို Security အားနည်းတဲ့ Account တွေကိုလည်း Security Checkup လုပ်ပေးတယ် Security မြှင့်ပေးတယ် Account Hack လုပ်မခံရအောင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို သင်ကြားပြသပေးတယ်။ 😉😉😉
ကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Website တွေကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် Website Administrator တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို Tools တွေကို ဘယ်လိုသုံးရတယ်၊ Website တစ်ခုကို ဘယ်လို ထိမ်းကျောင်း မောင်းနှင်ရလည်း ဆိုတာတွေကအစ သင်ပေးတယ် ဘာမှမသိ ဘာမှ မတတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကိုတောင် Website ပိုင်းဆိုင်ရာ Knowledge တွေကို အများကြီး သိရှိသွားအောင် လူပြိန်းတစ်ယောက်တောင် နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ သင်ပေးတယ်။ 😉😉😉
တန်ဖိုးနည်းတွေနဲ့ အားလုံးကို စိတ်တိုင်းကျအောင်၊ စိတ်ချမ်းသာအောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါ... 😊😊😊
အောင်ကျော်စိုး ( OSC-Myanmar )
🚹 - Aung Kyaw Soe
📬 - m.me/CityHunter.mm
📱 Viber - ‎‎09421157911
📞 - ‎‎09794426154
☎ - ‎‎09253351244
📬 - m.me/OSC-Myanmar.mm
📨 - punkboystar@gmail.com
🎭 - www.facebook.com/groups/OSC-Myanmar
🏢 - www.facebook.com/OSCMyanmar.mm
🌐 - www.OSC-Myanmar.com
🌐 Viber Public Chat - www.viber.com/OSC-Myanmar